Indodana kaBaxter iphawula ngoKhune nonozinti beChiefs
UNOZINTI weKaizer Chiefs u-Itumeleng Khune. Isithombe: Howard Cleland/BackpagePix
POTSHOZA | May 22, 2019
UMLOLONGI wonozinti kwiKaizer Chiefs obuye abambe itoho ngaphansi kukayise (uStuart Baxter) kwiBafana Bafana, uLee Baxter uphumele obala okokuqala ngoqweqwe lukanozinti wakuleli olimele u-Itumeleng Khune. Sekuyinto efana nomlando ukuthi iChiefs igcine iwinile ngokuthi engafakwanga esikwatini esiya kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) yize (uKhune) ebekhombisa izimpawu zokuthi yena useluleme.
UPotshoza usekuhoshe kaningi ukuthi iChiefs iyona ebingafuni ukuthi uKhune aye kwi-Afcon ngoba ikholelwa ekutheni kufanele alulame ngokugcwele ukuze kuthi uma kuqala isizini entsha abe esewumqemane. Nokho uBaxter omncane uwukhombe kwiChiefs umunwe ngalo nozinti athe useyazilolonga.
“UKhune usebenza ngokukhulu ukuzikhandla.
“Unikwe uhlelo lokuziqeqesha nethimba lethu elibhekele imizimba yabadlali kwiChiefs. Lolu hlelo anikwe lona yedwa olokuthi kuthi kushaya isikhathi sokuqala kwesizini entsha abe eseluleme ngokugcwele. Mayelana neBafana, ukube kuya ngami bekufanele kuhanjwe naye kwi-Afcon kodwa anginawo amandla okuthatha izinqumo ezifana nalezo,” usho kanje uBaxter omncane.
Lo mqeqeshi wonozinti uvikele onozinti bakhe ngendlela abenze ngayo kule sizini okusazothatha isikhathi ukuthi bayikhohlwe abasondelene neChiefs kwazise iqede ingaphandle kweTop 8.
“Uma ungumgadli ungawayeka amathuba amabili noma amathathu alula abantu basheshe bakhohlwe kodwa uma ungunozinti iphutha lakho liyanakeka.
“Yebo sibile nezinkinga konozinti kule sizini kodwa akubenzi ubulungiswa ukuthi sekungakhonjwa bona ngokushaya udaka kweqembu. Sibe nezinkinga eziningi ezintini okuhlanganisa nokulinyalelwa umuntu onjengoKhune.
“Sizamile lokhu ebesingakuzama ngoVirgil Vries, Daniel Akpeyi noBruce Bvuma kodwa nakhona kwaba nezingqinamba zakhona. Kusezandleni zethu nokho ukuthi sibhukula kanjani ngesizini ezayo ukuze sizosheshe sikhohlwe ngakho konke okusiphazamise kule sizini esanda kusongwa.
“Mayelana nokukhululwa kukaVries, nakhona anginawo amandla okuphawula ngoba lokho kwenziwa emazingeni angaphezulu kwami.”